Magavhuna eUS anotambira kuvhurwa kwemuganho kune vashanyi vakabaiwa jekiseni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Magavhuna eUS anotambira kuvhurwa kwemuganho kune vashanyi vakabaiwa jekiseni
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Magavhuna eUS anotambira kuvhurwa kwemuganho kune vashanyi vakabaiwa jekiseni.
National Governors Association yakamira yakagadzirira kushanda neHurumende kuti ive nechokwadi chekuenderera mberi kwekuchengetedza uye hutano hwevagari vedu apo ichiwedzera zviitiko zvehupfumi zvinouya nekufamba nekutengeserana.
Dhipatimendi reUnited States reHomeland Security rakazivisa kuvhurwa kwemiganhu yeUS kune vanhu vakabayiwa nhomba mwedzi unouya.
Magavhuna akati wandei eUS vakaratidza kunetsekana neHurumende pamusoro pekuenderera mberi kwekukanganisa miganho yekufamba pamuganhu kumatunhu avo.
Chiziviso cheChipiri inhau dzinogamuchirwa uye danho rakakosha mukurerutsa hupfumi munharaunda nekuda kwe COVID-19.
Nhasi, the National Magavhuna Sangano (NGA) akagamuchira chiziviso kubva kuDhipatimendi reHomeland Security (DHS) pane iyo kuvhurwa kwemiganhu yeUS kune vanhu vakabayiwa nhomba kutanga mwedzi unouya.
Mwaka uno wezhizha, maGavhuna akati wandei vakaratidza kunetsekana neHurumende nezvekuramba kuchiitika kwe ganhuriro dzekufamba pamuganhu pane vavanogara - vazhinji vacho varidzi nevashandi vemabhizinesi madiki, emhuri vanoshuvira kutangazve mashandiro.
Chiziviso cheChipiri inhau dzinogamuchirwa uye danho rakakosha mukurerutsa hupfumi munharaunda medu nekuda kwe COVID-19. NGA inomira yakagadzirira kushanda neHurumende kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa uye hutano hwevagari vedu apo ichiwedzera zviitiko zvehupfumi zvinouya nekufamba nekutengeserana.
Kana shanduko yeramangwana ikafanirwa, Magavhuna anoshevedza manejimendi kuti ashande pamwe nematunhu kuti vaone kuti nhungamiro yemitemo inotarisa kukanganisa kwenzvimbo munharaunda.
Yakagadzirwa mu1908, the National Magavhuna Sangano (NGA) ndiyo bipartisan sangano renyika maMagavhuna makumi mashanu neshanu. Kuburikidza neNGA, maGavhuna vanogovana maitiro akanakisa, kugadzirisa nyaya dzenyika uye nyika kufarira uye kugovana mhinduro nyowani dzinovandudza hurumende yenyika uye inotsigira misimboti ye federalism.